ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Yodel - ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | သြဂုတ် 3, 2017 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Yodel အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လာအောင်နှိုးဆွတဲ့သူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနိုင်ငံသားများ၏တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ပထဝီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကွာခြားပေမယ့်ဖန်တီးမှုတစ်ခုနျဖိုးထားနှင့်အနုပညာဝေမျှ, ခရီးသွားများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်စိတ်ဝင်စား. အတူတူကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်တွင်ကမ္ဘာလုံးတဦးတည်း Yodel ရှာဖွေတွေ့ရှိ.
နည်းပညာအဖြစ်, ခရီးသွား, နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကြိုတင်မဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးသေးငယ်ဖြစ်လာ. အဆိုပါ Global Yodel ကွန်ယက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမြင်ဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုစကားရပ်တစ်ခုပေါ်တယ်ဖြစ်ပါသည်, နေရာအရပ်မှတဆင့်ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရိုးရိုးသားသား. ကျနော်တို့လူတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့အတှကျလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ.